Anor Maevatanàna: tsy fantatra ny fiavian’ny volamena | NewsMada
Anor Maevatanàna: tsy fantatra ny fiavian’ny volamena
Manana masoivoho any amin’ny distrikan’i Maevatanàna ny Antokon-draharaha misahana ny volamena (Anor). Anisan’ny andraikiny ny fampanaraham-penitra ny fitrandrahana volamena any an-toerana ka voakasik’izany ny kaominina Maevatanàna I sy II, ny kaominina Beanana, ny kaominina Mahazoma, ny kaominina Berivotra 5/5, ny kaominina Andriba ary ny kaominina Antsiafabositra. Tanjona ny hampanaraham-penitra ny sehatry ny fitrandrahana volamena any an-toerana.
Maro ny fitetezam-paritra natao, iarahana tamin’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana (CTD) sy ny mpitrandraka madinika, nampahafantarana ny lalàna manan-kery satria tanjona iombonana ny hampitoviana ny fomba fijery ao anatin’ny fanajana ny lalàna.
Na teo aza ny fidinana ifotony maro natao sy ny fanentanana samihafa, tsikaritra fa tsy mbola tanteraka ny tanjona voalaza etsy ambony. Anisan’ny olana sy sakana tsikaritry ny Anor ny tsy fahafantarana ny fiavian’ny volamena, izay tokony hanamora ny fanaraha-maso ataon’ny kaominina sy ny CTD.
Tsy ampy koa ny fanaraha-maso eny ifotony, any amin’ireo toeram-pitrandrahana. Antony, mifanalavitra be ny toerana misy azy ireny sy ny renivohitry ny kaominina. Tsy ampy anefa ny isan’ny mpiasan’ny kaominina ka miteraka kolikoly sy ny filazana tsy marina ny vokatra volamena tena misy. Lasa tsy mazava, tsy mangarahara ny vidin’ny volamena, noho izany. Manampy ireo ny tsy fahatomombanan’ny lafiny taratasy amin’ny fanjakana hany firaiketana ara-panjakana hamantarana ny antsipiriany mikasika ny volamena sy ny vidiny. Miteraka ny kolikoly sy ny fanambarana hosoka koa izany.
Manoloana ireo, nifanaiky sady nifanaraka ny mpisehatra nihaona tamin’ny Anor fa hanao fanaraha-maso any amin’ny sehatra misy azy avy. Marihina fa misy tokoa ny sazy manafay izay voamarina fa mandika ny lalàna.
Tsy any Maevatanàna ihany ny tranga toy izao fa saika hita manerana ny Nosy. Ny tena tsikaritra, manararaotra mivdy mora any amin’ny mpitrandraka madinika volamena ny mpanangona sy ny mpividy eny ifotony fa lafo foana ny vidiny eo amin’ny tsena.